Ny governemanta rosiana ho 'maminavina ny hankatò' ny Otkritie banky vondrona. Inona no dikan'izany
Rosia ny Banky Foibe dia nanambara ny fandaminana indray ny banky vondrona»Otkritie»ny iray amin’ireo lehibe indrindra ny ara-bola ny andrim-panjakana ao amin’ny firenena, an-jatony lavitrisa robla eo amin’ny tantara. Ny Otkritie banky vondrona dia ahitana ny banky amin’ny anarana sy ny banky Tochka, Roketbank, Rosgosstrakh Banky, ary ny fikambanana hafa. Ireo rehetra ireo andrim-panjakana dia izao ho»hahitsy»Eny, ny fandaminana indray dia midika hoe ny banky dia tsy mahafeno ny fepetra rehetra ny regulator, Rosia ny Banky Foibe, raha tsy misy ny vola avy amin’ny»reorganizer»Rehefa ny Banky Foibe mahita toe-draharaha tahaka izany, dia manana safidy roa: dia manafoana ny banky ny fahazoan-dalana (nandrava ny banky), na maminavina ny hankatò izany. Toy ny fitsipika, dalàna maminavina ny hankatò ny banky lehibe izay manan-danja eo amin’ny firenena na ny faritra mizana. Amin’ny banky amin’ny fanontaniana lasa ny fananan’ny hafa, izay mahery vaika kokoa banky na maro banky, na ny Fanjakana Petra-bola Fiantohana ny fahafahana Misafidy hoatran’ny tompony ny banky.
Ny reorganizer rehabilitates ny banky ao amin’ny fanontaniana. Mba hanaovana izany, ny toetry ny olana malefaka findramam-bola ny reorganizer. Rehefa afaka izany, ny banky ny tompony vaovao manapa-kevitra raha mba hitandrina ny voavonjy banky na mivarotra izany. Rosia ny Banky Foibe dia manao ny asa mihitsy, izay no mahatonga io fandaminana indray tsy mitovy amin’ny rehetra ny ny hafa kosa nanao azy nanomboka tamin’ny. Mino fa maro loatra private banky maintsy ho tafiditra ao amin’ny fandaminana indray ny dingana, ny Banky Foibe dia nanapa-kevitra fa raha ny regulator namoaka ny vola ho an’ny fandaminana indray, izany ihany koa dia tokony ho ny olona mba hanara-maso ny famonjena fomba. Ny lalàna vokany izany dia navoaka tany am-piandohan’ity taona ity, ary ny Banky Foibe no namorona ny antsoina hoe Sehatry ny Banky Fanamafisana ny Fototra, izay ny fanaraha-maso. Izany dia ny tenany izay ho ankehitriny ny fitantanana Otkritie.
Izany hoe ela loatra
Ny teo aloha ny rafitra dia azo antoka fa nanana ny anjara drawbacks: indraindray fandaminana indray dia nampiasaina mba hanafaka amin’ny banky ny tompony sy ny trosa (indraindray mitovy ny olona) ny andraikitra noho ny tsy fahombiazana indraindray mahery banky dia averina alamina mba hahazo ny fidirana amin’ny maharitra preferential sary nahazoan-dalana avy amin’ny governemanta, ary indraindray reorganizers nanao ny zava-drehetra mba hamindra ny poizina ny fananana ny banky ho averina alamina. Mandritra izany fotoana izany, fa mbola tsy mazava ny fomba ny vaovao ny rafitra miasa. Ny Banky Foibe no ny regulator, tsy ny tsena mpifaninana, ary izany dia tsy manana traikefa amin’ny fitantanana ny banky ara-barotra. Izany dia mazava ihany koa ny fomba ny Banky Foibe no tokony mifehy ny banky indostria raha niara-mitondra tena ho toy ny orinasa mpandray anjara.
Fa sarotra ny milaza izany
Amin’ny lafiny iray, Otkritie manana ny tompony vaovao: fa tsy ny vondrona tsy miankina olona, ny mihazona ny orinasa ankehitriny an’ny mahery indrindra ny rafitra ara-bola any amin’ny firenena. Ny Banky Foibe mivantana manome antoka fa ireo rehetra ireo banky ao anatin’ny Otkritie mihazona ny vondrona dia mbola miasa amin’ny maha-ara-dalàna. Ny banky’ ny fahazoan-dalana tsy ho foanana intsony, ny birao dia mijanona misokatra, sy ny ara-poto-kevitra izay mety midika ny zava-drehetra dia mbola toy ny teo aloha. Etsy ankilany, fa azo atao ny milaza ny fomba mafy ity vaovao ity dia misy fiantraikany Otkritie ny mpanjifa, na raha tsy izany dia nampahatezitra ny mihazakazaka amin’ny misy ny banky. Raha mpanjifa manomboka ny fanalana ny vola en faobe (sy ny Banky Foibe dia nampanantena fa tsy hametraka nampiato ny trosa’ claims), ny voka-dratsy ho ampoizina
WTO - Accessions: Federasiona rosiana